Kungani Amakhamera Worn-Worn Esiza Ukuphathwa Komthetho? - Izixazululo ze-OMG
Kungani Amakhamera Womzimba Worn asiza Ukuphathwa Kwezomthetho?
Ubuchwepheshe buchazwa njengeqoqo lamakhono, ulwazi, noma amakhono asetshenziswa ngezinto ezifakwayo ukufinyelela ekugcineni okuthile; Kepha emkhakheni wezokuphepha, yini lokho ukuphela? Kubonakala kusobala ukuthi ukwehlisa ubugebengu, nokho, ukusungulwa kwakhe bekungasoloko kuhlobene kulokhu.
Kusukela ekuqaleni komlando, umuntu ubelokhu efuna ukuwela izithiyo zokungazi futhi lokhu kuholele kumlando oyisisekelo wobuchwepheshe, kepha kubalulekile entuthuko elandelayo, efana nesondo, i-metallurgy, njll.
Amakhamera omzimba angamarekhodi aklanyelwe ukugqokwa kuyunifomu yesiphathimandla sokuqinisekisa ukuthotshelwa komthetho, enikeza ukurekhodwa komsindo nokubukwayo kwemicimbi ngokombono walowo oyigqokile, ekwenzeni imisebenzi yayo.
Abezomthetho abasebenzisa amakhamera wevidiyo womzimba (i-CVC) ukurekhoda imisindo nezithombe ngesikhathi sangempela ngesikhathi sezehlakalo nokusebenzisana namalungu omphakathi jikelele, ofakazi kanye nabasolwa ukuze bazisebenzise ngemuva kwalokho njengengxenye yophenyo kanye nokuqoqa ubufakazi. Amarekhodi enziwe nge-CVC angeza inani kubufakazi obuqoqiwe; akufanele zibonwe njengomthombo wobufakazi bodwa.
Uhlelo lwe-HVAC luqukethe ikhamera encane enamathiselwe umfaniswano wephoyisa noma izibuko zelanga noma egqokwa njengesigqoko sokuzivikela, okurekhoda imisindo nezithombe ngesikhathi ukuxhumana kwephoyisa nomphakathi. Imininingwane eqoshiwe yedijithali iqopha imicimbi ngokombono wesikhulu ekwenzeni imisebenzi yaso.
I-CAC yakhelwe ukurekhoda obala amarekhodi azonikeza irekhodi elithembekile, eliqondile nelingashayi emhlolweni lezehlakalo ezibandakanya amalungu eunifomu yezinhlangano Zomthetho. Inhloso yalomkhuba ukuthuthukisa ukungafihli lutho kanye nokubika uma kufanele kuphakame imibuzo noma ukukhathazeka noma uma amacala kufanele abekwe ngenxa yesigameko, futhi ahlinzeke nobufakazi bokushushiswa uma kwenzeka isigameko. bekufanele ihambisane nezenzo zobugebengu.
I-ejensi yokuqinisekisa ukusebenza komthetho yenze ucwaningo olunokwenzeka ngokusetshenziswa kwe-CVC okubandakanya ukubukeza kahle izindaba eziyinkimbinkimbi zobumfihlo kanye nezindaba zezomthetho noma zenqubomgomo. Okokusebenza kwe-CAC nezobuchwepheshe zivele zivela ngokushesha, futhi izinhlangano zihlaziya njalo izinqubomgomo zazo, izinqubo, kanye nemishini yokuqinisekisa ukuthi imigomo esebenza ngempumelelo kakhulu iyasetshenziswa. Le ngxenye yomsebenzi ifaka ucwaningo namaphrojekthi wokuhlola ukuhlola ubuchwepheshe obusha. Inhloso yezinhlangano ezisebenza ngoMthetho ukuhlinzeka amalungu angaphambili ngobuchwepheshe obuphambili namathuluzi emidiya yezenhlalo ukukhulisa amandla abo okuphendula izinto ezingokoqobo ngenkathi kuqinisekiswa ukuphepha komphakathi namaphoyisa.
Lezi zivivinyo ziphinde zakhomba ngokunembile izici ze-CAC ukuze zihlole kangcono izidingo ze-ejensi yokuphoqelela umthetho ngokuphindaphinda kwezehlakalo ezibandakanya ukusetshenziswa kwamandla. Ngokuya ngemigomo yokuhlola kanye nemingcele enikezwe yizimo eziphindaphindwayo, bekungenzeka ukuthi kugxilwe kokuguquguqukayo okuthile okuhlobene nazo zonke izici zokusebenzisa amandla omzimba ukunquma indawo engcono yokubeka ikhamera ephoyiseni elenza imisebenzi yalo kanye naku izici i-CVC okufanele ibe nazo ukuhlangabezana nezidingo zokuqoqwa kobufakazi.
Izinsizakalo zamaphoyisa zisebenzisa ubuchwepheshe obusha ukugcina amaphoyisa namalungu omphakathi abasebenzisana nawo bephendula nganoma yisiphi isenzo. I-CVC ihlinzeka ngokusobala okukhulu nokuziphendulela kubo bonke abathintekayo futhi iveza isithombe esizimele salokho amaphoyisa ahlangabezana nakho ezimweni ezijwayele ukuba namandla kakhulu. Amaphrojekthi afana nalawa angahlola futhi anqume inani elengeziwe lamathuluzi amasha wamaphoyisa. Njengombutho wamaphoyisa wanamuhla, izinhlaka zokuphoqelela umthetho zihlale zicwaninga futhi zihlaziya ubuchwepheshe obusha ukuze zifeze igunya lazo lokuvikela abomphakathi. Inhloso yale ndlela ihlala ifana - ukuhlinzeka amalungu e-ejensi yokuphoqelela umthetho ngamathuluzi awadingayo ukunqoba izinselelo ezihambisana nesimo samanje sobuphoyisa endaweni eguquguqukayo njalo.
Ubungozi bumfihlo bakhonjwa ngesikhathi sokuHlolwa Komthelela Wobumfihlo (i-PIA), futhi kwenziwa izincomo ezilandelayo ukuze banciphise:
Ama-ejensi wokuqinisa umthetho azokwakha inqubomgomo yokuqinisekisa ukugcinwa, ukulahlwa kanye nokugcinwa kwamarekhodi enziwe nge-CVC;
I-ejensi Yokuphoqelelwa Kwezomthetho ngeke ikuqophe konke ukusebenzisana kwayo nezingxoxo namalungu omphakathi;
Lapho amalungu ejensi asebenzisa i-CVC kuhlaka olusemthethweni lwemisebenzi yawo, azokwenza lokho obala
Ngokusezingeni elifanele ngangokunokwenzeka, amalungu e-Ejensi Yezomthetho azokweluleka izakhamizi lapho zihlungwa;
Ekupheleni kokugudluka ngakunye, konke ukusakazwa kwevidiyo kuzolayishwa kuma-ejensi agunyazwe ukugcinwa okuphephile ukuze kudalulwe, kugcinwe futhi kuchithwe;
Izakhamizi zingacela ukubona imininingwane yazo yomuntu siqu. Izicelo zokufinyelela ekubhalisweni kwe-CAC ezenziwe ngaphansi kwe-Access to Information Act kanye noMthetho Wobumfihlo zingathunyelwa ngekhasi lewebhu le-ATIP.
Ukusetshenziswa kwama-CAC kuzokwaziswa umphakathi jikelele, ikakhulukazi emaqenjini lapho kutshalwa khona amakhamera, nangaphakathi kumalungu ezinhlangano zokuphoqelela umthetho ukuwazisa ngezinqubomgomo kanye nangemikhuba emihle kulokhu.
Ama-CAC asetshenziselwa ukuqoqa ubufakazi bophenyo lobugebengu kanye nokugcwalisa ukuzibophezela kwama-ejensi okuphoqelela umthetho ekwakheni ubudlelwano ngokwazisa amakhaya aphephile nemiphakathi ephephile ezweni lonke. Ukusetshenziswa kwama-CAC kuzophinda futhi kusekele igunya lama-ejensi okuphoqelela umthetho okuvimbela ubugebengu, ukuphenya amacala, ukugcina ukuthula nokuhleleka, ukuphoqelela imithetho, nokunikela ekuphepheni kwezwe. , ukuqinisekisa ukuphepha kwezikhulu zikahulumeni, izicukuthwane ezivakashele, kanye namalungu ohambweni lwangaphandle, nokunikeza izinsizakalo ezibalulekile zokuxhasa ukusebenza kwezinye izinhlaka zomthetho. Lapho bexhumana nomphakathi, amalungu azosebenzisa ama-CAC ngokubona kwawo, kuya ngezinqubomgomo zokuxhumana zomphakathi. Ama-ejensi okuphoqelela umthetho azibophezele ekuvikeleni imininingwane yomuntu eqoqiwe futhi aqhubeke nokubuyekeza izinqubomgomo nezinqubo zayo ukuqinisekisa ukuthi ziyahambisana nemithetho yenhlangano.
Ukubuka okuphelele kwe-6160 Ukubuka kwe-8 Namuhla